Na Na Na Na - Na Na Na Na - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>igwe igwe>> Na Na Na Na
edemede si: igwe igwe | oge: April 9, 2013 | Tag:igwe igwe	|
Ball Mill, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ na-ekpuchi ihe ọkụkụ, Ball Mill, ngwá ọrụ ndị bara uru, ndị na-emepụta ihe igwe na-emepụta igwe. belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Mgba igwe bụ ihe na-atụgharị ihe ọhụrụ na-akụda ngwá ọrụ dị mkpa. Mmiri na-atụ bọl na-adaba na akọrọ na mmiri na-egweri ihe dị iche iche ịnweta. Ka ọ dị ugbu a, e jiriwo ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, dị ka simenti, ihe ndị ọzọ, ngwaahịa Portland, ihe owuwu ụlọ ọhụrụ, fatịlaịza, metal ferrous, metal non glassrous, glass, ceramics, wdg. bụ mma agha dị oké mkpa.
Egwuregwu Mgba Egwu na Atụmatụ
1.Simple ọdịdị, arụmọrụ dị mma, ikike dị elu.
2.Easy nwụnye, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
3.Wọnye akụkụ dị iche iche na-edozi ahụ, na ogologo ndụ.
Nkọwapụta nke Mkpụrụ Mmiri
model Max. Nri Nri
(Mm) Nwepụta Ngwa
(Mm) Ịgba Mgba
(t / h) Arọ
Φ3200 × 4500 ≤25 0.047-0.4 65 18 800 Dị ka
usoro usoro 137000
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị ntụpọ, mgbanwe ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ngwaahịa igwe nri.
Iwu Na-arụ Ọrụ nke Mmiri Ngwá
Mkpụrụ igwe na-atụ bọmbụ bụ nke na-agbanwe agbanwe na tubular, ya na ọnụọgụ abụọ. Ọ bụ nke grid ụdị na-gear-chụpụrụ. A na-ezipụ ihe ndị a na-agba gburugburu nakwa na ọ bụ n'ime ntanetị nke mbụ na-echekwa ihe dị na ya. Ahịa ụlọ ahịa nwere ọnụ ọgụgụ ladder scaleboard ma ọ bụ ripple scaleboard, ma nwee bọọlụ ọla nke nkọwa dị iche iche. Osimiri na-agbanwe agbanwe na-akpata ike agha. N'okpuru ọrụ nke ike mgbagha, a na-ebugharị bọl ígwè ahụ dị elu ma daa n'elu ihe ndị ahụ maka igwu. Mgbe a na-atụgharịghị nke ọma na akpa anụ ahụ, ihe ndị ahụ ga-abanye na nke abụọ nke ụlọ ahịa (nke nwere nchara bọl na ọnụ ọgụgụ) maka ịga n'ihu. N'ikpeazụ, a na-ahapụ ntụ ntụ ahụ site na tebụl grid iji mechaa ntụgharị.
← S Micro ntụ ntụ Mill
Nnukwu ntụpọ nke Rotor Style Powder Separator →